Ihe edemede Sam Melnick na Martech Zone |
Edemede site na Sam Melnick
Sam Melnick bụ VP nke Marketing na Allocadia, Onye ndu na sọftụwia Arụ Ọrụ Nchịkwa, na-achịkwa ihe karịrị $ 20B na azụmaahịa na-etinye oge a. Ọ bụ onye ahịa na-ahụ maka mmeri na nyocha nke ahịa nwere ahụmịhe dịka onye na-azụ ahịa na Vivox, onye nyocha ụlọ ọrụ CMO na IDC, na onye njikwa ihe ịga nke ọma na Lattice Engines. Sam bụ ọkà okwu na-ekwukarị na mmemme ụlọ ọrụ ahịa yana ọde akwụkwọ nke nyocha azụmaahịa. A matara ya dịka onye ọkachamara ọkachamara na teknụzụ kachasị dị 50, gbakwunyere otu n'ime ndị isi 40 New England na ọdịnaya na ahịa dijitalụ. Sam gụsịrị akwụkwọ na UMass Amherst's Isenberg School of Management.
Tọzdee, Nọvemba 23, 2017 Na Mọnde, Nọmba 28, 2017 Sam Melnick
CMO mmefu ego na-ebelata, ka ndị na-ere ahịa na-agba mbọ na ntozu ego, dị ka Gartner si kwuo. Na nyocha nke ọma banyere itinye ego ha na mbụ karịa oge ọ bụla, ndị CMO kwesịrị ịghọta ihe na-arụ ọrụ, ihe na-adịghị arụ, yana ebe ha ga-eji dollar ọzọ ha ga-aga n'ihu na-ebuli mmetụta ha na azụmaahịa ahụ. Tinye Marketing Performance Management (MPM). Kedu ihe bụ Nrụ Ọrụ Azụmaahịa? MPM bụ nchikota nke usoro, teknụzụ, na omume nke ndị otu ahịa na-eji eme atụmatụ ịre ahịa,